TAARIIKHDA DIB-UHESHIISIINTA SOOMAALIYA: W/Q: MUUSE CABDI • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
⦁ Djibouti 1……………..June 1991………Jabhadiha ayaa lagu marti qaaday
⦁ Djibouti 2……………..July 1991………. Jabhadihii ayaa lagu marti qaaday
⦁ Adisababa 1 iyo 2 …………Jeenaweri/ Maarij 1993…….. qaybahii kala duwanaa ee siyaasada ku loolamayay ayaa goob joogayaal ka ahaa
⦁ Sodere…………………Nov/1996-Jen/1997………. Qaybihii kala duwanaa ee siyaasada
⦁ Carta………….May-Ogost 2000
⦁ Soomaalida oo aan laga qayb galinin talada dib uheshiisiinta ayaa ka dhigtay inuu khasaare ku danbeeyo dadaaladii dib uheshiisiinta, tusaale ahaan shacabka Somaliland iyagaa si iskood ah iskugu yimid Boorama dhistayna dawladnimadooda iyada oo aanay cidi ku dhex jirin, tan ayaana xal waara unoqotay Somaliland. Balse Soomaalida kale wali waa lagu dhex jiraa.
⦁ Shirarkii dib uheshiisiinta oo ka dhacay wadamo shisheeye isla markaasna ay maalgalinayeen dawlado shisheeye ayaa keentay midho la’aanta hawlihii ay qabteen.
⦁ Dawladaha aduunka oo awooda saaray sidii ay dawladnimo uga dhisi lahaayeen Soomaaliya halka nabadiiba aanay jirin, oo dawlada la doorto xafiiskeeda ay nabadgalyo daro kajirto. Casharkan Somaliland ayay dunidu si fiican ugu baratay oo markii Nabada laga hirgaliyay ayay dawladnimo dhisteen.
⦁ Adduunku waxa uu ku mashquulay sidii awooda loogu qaybin lahaa dhinacyada is haya balse qorshahaba kuma aanay darsanin sidee horta khilaafka loo xalliyaa. Marka dadka khilaafka ka dhexeeya la dhameeyo ayuun baa laga hadli karaa side baynu awoodda dawladnimana uqaybsannaa.
⦁ Waddamada raba inay Soomaalida dhexdhexaadiyaan oo aan dhexdhexaad ka noqonin arimaha kuwaas oo si gaar ah ula safta dhinacyada is haya.
⦁ Waxa jira wali dad raba inaan xasilooni buuxda aanay Soomaaliya ka dhalanin kuwaas oo faaido ku qaba is-qababsiga iyo in xasilooni daradu ahaato mid waarta. Kooxahaasna wali dhindu si fiican umay baranin. Waxaana wali dhexdhexaadiyayaasha ka maqan inay ogaadaan yay talada Soomaalidu ka go’daa.